မြန်မာ့လက်မှုအနုပညာတွေကို ဆန်းသစ်တဲ့ စိတ်ကူးတွေနဲ့ ပြန်လည်ရှင်သန်လာစေဖို့ လူငယ်အနုပညာရှင်တွေက ကြိုးစားနေကြပါတယ် သီရိဟန် ရေးသားသည်။ “ပိုမိုဆန်းသစ်တဲ့ အိုင်ဒီယာတွေ နဲ့ပြုလုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ အရောင်းအဝယ်တွေ ပိုကောင်းလာတယ်” လို့ မြန်မာ့ ရုပ်သေး လက်မှုပညာရှင် ကိုအောင်ထိုက်စိုးက ကန်တော်ကြီး ကရဝိတ်ဥယျာဉ်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ မြန်မာ့လက်မှု အနုပညာပြပွဲနဲ့ အရောင်းပွဲတော်မှာ ပြောပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက်နေ့ကနေ မတ်.
ဖူးပွင့်ဝေဆာစ ပြုလာတဲ့ မြန်မာဖက်ရှင်လုပ်ငန်း
မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး ပွင့်လင်းလာမှုကြောင့် ဖက်ရှင်လုပ်ငန်းများ တဟုန်ထိုး တိုးတက်လာခဲ့ပြီး နိုင်ငံ၏ လူသိအများဆုံး ဒီဇိုင်နာများ ပါဝင်သော အထူးပွဲတော်များ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည် နိုနိုအောင် ရေးသားသည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်အနည်းငယ်အထိ ဖက်ရှင်ဝါသနာပါသူများသည် နိုင်ငံတကာ နာမည်ကြီး အမှတ်တံဆိပ် အဝတ်အစားများ၊ ဒီဇိုင်နာများချုပ်သော အဝတ်အစားများကို ရန်ကုန်မြို့တွင် ဝယ်ယူနိုင်ရန်.
အံ့ဖွယ်ဆေးဝါးနဲ့ ကင်ဆာကုတဲ့ ရန်ကုန်က ဆေးဆရာတွေ
ရန်ကုန်မြို့က ဗိန္ဓောပျောက်စေဆရာတွေ ပြုလုပ်တဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ ဆေးမှုန့်က အလွန်အမင်း ဖျားနာတာတွေကို ကုစားနိုင်တယ်လို့ ဆိုကြပေမဲ့ ခိုင်လုံတဲ့သက်သေ မရှိသေးဘဲ သဏ္ဍာန်တူ ဆေးဝါးသာသာပဲ ဖြစ်နေပါတယ်။
နယ်ပယ်အသီးသီးက ကျွမ်းကျင်သူတွေ အတွေ့အကြုံ ဟောပြော ဖလှယ်ကြမယ့် TED ဆွေးနွေးပွဲ
TEDx ဟောပြောပွဲအား Myanmar Connects ဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ မတ် ၂၃ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်
သမဝါယမဝန်ကြီးဌာနအား စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်သို့ ပို့ရန် အကြံပြု
ကျေးလက်နေ တောင်သူလယ်သမားများအား ချေးငွေထုတ်ပေးခြင်းကို လုပ်ဆောင်နေသည့် သမဝါယမဝန်ကြီးဌာနသည် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနအောက်တွင်သာ ရှိသင့်ဟု အကြံပြု
တယ်လီနောမြန်မာက နံပါတ်အလှ ၁၀၀ အား မန္တလေးတွင် လေလံတင်ရောင်းချမည်
ရန်ကုန်မြို့တွင် တယ်လီနောက နံပါတ်အလှများ လေလံတင်ရောင်းချနေစဉ်။ ဓာတ်ပုံ- တယ်လီနောမြန်မာ ရန်ကုန်၊ မတ် ၁၇ တယ်လီနော၏ အထူးနံပါတ် ၁၀၀ ကို မန္တလေးမြို့တွင် မတ် ၂၅ ရက်နေ့တွင် လေလံတင်ရောင်းချကာ ရရှိသည့် အကျိုးအမြတ်များကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်ရှိ မြတ်လေးရုံ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းတွင်.
အင်န်အယ်လ်ဒီ အမတ်သစ်တွေ အဆင့်သင့်ဖြစ်နေပြီလား
ဟိန်းကိုစိုး ရေးသားသည်။ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကို စစ်ဆေးခဲ့တဲ့ အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲမှာ ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးက အမတ်တွေက အများစုက မအောင်မြင်ခဲ့ကြပါဘူး။ တိုင်းဒေသကြီးတွေထဲမှာ အဲဒီနှစ်နေရာက အဆိုးဆုံးပဲလို့ အမတ်တွေနဲ့တွေ့တဲ့ တွေ့ဆုံပွဲမှာ ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မတ်လ ၁ ရက်နေ့၊ နေ့လည်.
အင်န်အယ်လ်ဒီ၏ အတိုက်အခံအဖြစ် ရပ်တည်သွားမည့် သဘောထား မပြောင်းလဲသေးဟု အေအင်န်ပီပြောကြား